Kusolwa umkhonyovu emasosheni | IOL Isolezwe
Kusolwa umkhonyovu emasosheni
Isolezwe / 17 August 2012, 1:03pm /
KUSUKE isidididi ngesikhathi intsha ifuna izikhala zomsebenzi emkhosini wezokuVikela enkanjini yamasosha eThekwini.
Izolo abantu bebemi ulayini omude kodwa ngesikhathi sekufanele ophambili angene amasosha abevimbe esangweni avele, abize noma ngubani okulayini ngezibongo kwase kuba nezixakaxaka.
Umfundi ophambili ubegcina esebhadle esangweni kubizwa abangemuva kwase kuphakama imimoya kwabebezohlola ukuthi bawutholile yini umsebenzi.
Intsha okukhulunywe nayo lapha iningi layo ikhale ngokuthi lagcwalisa amafomu okucela umsebenzi kodwa namanje amagama abengekho ohlwini lalabo abagcwalise amafomu okuzohlungwa kubo. Baphinde bakhala ngokuthi bashayelwe ucingo ukuze bafike kodwa uma sebekhona kwangabe kusabizwa ngamagama bese kukhonjwa abantu ngomunwe.
Omunye wabebelapha, ocele ukungadalulwa, uthe: “Mina selokhu ngafika ngoMsombuluko kodwa namanje angikaze ngibizwe. Okungixakayo wukuthi uma sihlolwa siyaphumelela kodwa singaqashwa. Angazi ukuthi kuhlungwa kanjani eThekwini.”
Uthe wawagcwalisa amafomu okucela isikhala somsebenzi kodwa-ke akazi ukuthi kutonyulwa abanjani.
Abanye baye bakhala ngokuthi KwaZulu-Natal kunomkhonyovu ngoba ngisho izingane ezigqoke umfaniswano wesikole ziyakwazi ukungena zingabuzwa nokuthi zifunda kuphi bese kuthi bona asebeqedile isikole bazitshwe.
UBrigadier-General Xolani Mabanga obhekelele ezokuxhumama emkhosini wezokuVikela, uthe bakhiphe amafomu okucela izikhala zomsebenzi wamasosha, okuwumkhakha walawo ahamba ngamabhanoyi, awasemanzini nodokotela bomkhosi.
Uthe abantu bayawagcwalisa bese bebizwa bezohlolwa ukuthi bakulungele yini ukusebenza emkhosini wezokuVikela.
“Uma umuntu ephumelela kukho konke esimhlola kona ube esengena ngaphansi komkhosi wezokuVikela. Abantu abavele bazifikele, uma sithi sithatha abantu siye sikhiphe amafomu kuqala. Udaba lwaseThekwini anginalwazi ngalo kodwa-ke sengizolulandela ngoba senilubeke ezithebeni zethu,” kusho uBrigadier General Mabanga.